﻿﻿ Mahadhamma Pala Society
Media (Audio/ Video)
မ ဟာ ဓ မ္မ ပါ လ အ သင်း (MAHADHAMMA PALA SOCIETY)
( မ ဟာ ဓ မ္မ ပါ လ၊ ဓ မ္မ စာ ပေ ထိန်း သိမ်း စောင့် ရှောက် ရေး အ ဖွဲ့)
မူ ဝါ ဒ နှင့် လုပ် ငန်း စဉ် များ
မ ဟာ ဓ မ္မ ပါ လ အ သင်း ၏ ဘာ သာ ရေး နယ် ပယ် တွင် ဆောင် ရွက် ရန် စဉ်း စား ထား သော လုပ် ငန်း များ အ နက် ဦး စွာ အ ကောင် အ ထည် ဖော် လို သော လုပ် ငန်း မှာ ဓ မ္မ စာ ပေ များ ပြန့် ပွား ရေး နှင့် အ စဉ် တည် တံ့ အောင် ထိန်း သိမ်း စောင့် ရှောက် ရေး လုပ် ငန်း ဖြစ် ပါ သည်။ ယင်း လုပ် ငန်း ဆောင် ရွက် နိုင် ရန် အ တွက် ဗု ဒ္ဓ စာ ပေ နှင့် တ ရား တော် များ ကို တစ် နေ ရာ တည်း တွင် electronic copy အ ဖြစ် စု စည်း ထား ရှိ ပြီး Buddha Electronic Resource Centre အ ဖြစ် တည် ထောင် ရန်၊ ထို့ နောက် e-Library များ တစ် ခု ပြီး တစ် ခု တည် ထောင် ပြီး ဗု ဒ္ဓ စာ ပေ နှင့် တ ရား တော် များ ကို လူ တိုင်း အ လွယ် တ ကူ လေ့ လာ နိုင် ရေး ဆောင် ရွက် ပေး ရန် နှင့် e-Library များ သို့ မ လာ ရောက် နိုင် သူ များ အ တွက် Internet မှ လေ့ လာ နိုင် မည့် Web site တစ် ခု တည် ထောင် ဆောင် ရွက် ပေး ရန် စ သော လုပ် ငန်း များ ကို လုပ် ငန်း စဉ် အ ဖြစ် ချ မှတ် ဆောင် ရွက် ပေး ရန် ရည် မှန်း ချက် ထား ရှိ ပါ သည်။ ယင်း သို့ ဆောင် ရွက် နိုင် ရန် အ တွက် မ ဟာ ဓ မ္မ ပါ လ အသင်း (MAHADHAMMA PALA SOCIETY) ကို ဖွဲ့စည်း ခဲ့ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။
ရည် ရွယ် ချက်
အောက် ပါ အ တိုင်း ချ မှတ် ထား ရှိ ပါ သည်။
(က)ဗု ဒ္ဓ စာ ပေ နှင့် တ ရား တော် များ ကို ထိန်း သိမ်း စောင့် ရှောက် ရန်။
(ခ)ဗု ဒ္ဓ စာ ပေ နှင့် တ ရား တော် များ ကို လူ တိုင်း အ လွယ် တ ကူ လေ့ လာ နိုင်၊ ရ ယူ နိုင် အောင် ဆောင် ရွက် ပေး ရန်။
(ဂ)ဗု ဒ္ဓ စာ ပေ နှင့် တ ရား တော် များ ကို သာ သ နာ တော် နှင့် အ မျှ အ စဉ် တည့် တံ့ ခိုင် မြဲ အောင် ဆောင် ရွက် သွား ရန်။
(ဃ)ယင်း သို့ ဆောင် ရွက် ရာ တွင် ဗု ဒ္ဓ စာ ပေ အ ဖွဲ့နှင့် ညီ အောင် အ သင်း အ ဖွဲ့အ ဖြစ် ပေါင်း စပ် ၍ လွတ် လပ် သော အ ဖွဲ့ အ စည်း အ ဖြစ် သီး ခြား ရပ် တည် ဆောင် ရွက် သွား ရန်။
ရည် မှန်း ချက်
ဖေါ် ပြ ပါ လုပ် ငန်း စဉ် များ ကို ဆောင် ရွက် ရာ တွင် လူ မှု ရေး၊ နိုင် ငံ ရေး များ ပါ ဝင် ပတ် သက် စေ ခြင်း မ ရှိ စေ ဘဲ မြတ် ဗု ဒ္ဓ ၏ ထေ ရ ဝါ ဒ တ ရား တော် အ စစ် အ မှန် များ ထွန်း ကား ပြန့် ပွား ရေး နှင့် အ စဉ် တည် တံ့ ခိုင် မြဲ ရေး ကို သာ ရန် မှန်း ထား ရှိ ဆောင် ရွက် သွား ပါ မည်။
Digitizing the Dhama books at Kaba-Aye Chattha Sanghayana Center, Pitakas Taik (Dhama Library) for Maha Dhamma Pala Society in Yangon, Myanmar. CE Technology, Mahadhammapala, Dhamma Pala, E-library, Digital Library.
မဟာဓမ္မပါလအသင်းနှင့် CE Technology တို့မှလှူဒါန်းပါသည်။